Barnaamijyada sawirada loogu badalo muuqaalo - VidaBytes | LifeBytes
Barnaamijyada loogu beddelo sawirrada muuqaallo
Iris Gamen | 13/06/2022 22:31 | Barnaamijyada
Haddii aad u baahan tahay inaad sawiradaada u beddesho fiidiyowyo si aad u taageerto mashaariicdaada dhijitaalka ah, waxaad joogtaa meesha saxda ah. Waxaan dooneynaa inaan tilmaamno qaar ka mid ah barnaamijyada lacag-la'aanta iyo lacag bixinta ugu fiican. Waxaad baran doontaa qalabka ugu fiican si aad u siiso sawiradaada wareeg dhan 360, adoo ku daraya hal-abuur iyo madadaalo.
Fiidiyowyada iyo sawirada la dheehday labaduba waa laba walxood oo gaar ah, maadaama waqti aad u yar gudaheed ay si sax ah fariin ugu soo dirayaan dhagaystayaasheenna. Habka loogu beddelo sawirrada muuqaallo, Waxay caqabad ku noqon kartaa qaar badan oo idinka mid ah haddii aadan u isticmaalin aaladaha gaarka ah.
Waxyaabaha muuqaalka ah labadaba nolosheena gaarka ah, isticmaalka shabakadaha bulshada, iyo goobta shaqada, waa mid aad lagama maarmaan u ah haddii ay tahay inay saameyn ku yeelato dhagaystayaasha kala duwan ee na arki kara. Waa anaga hal-abuur ahaan, yaa Waa inaan saameyn ku yeelanaa dhagaystayaashan annagoo adeegsanayna walxaha naga dhigaya inaan ka soocno inta kale.
1 Qalabka ugu fiican ee loogu badalo sawirada fiidiyowyada
1.1 Adobe Spark Video ama Adobe Express
1.3 Gudaha Video
Qalabka ugu fiican ee loogu badalo sawirada fiidiyowyada
Qaybtan, waxaad ka heli doontaa a xulashada yar ee waxa anaga ayaa ah qaar ka mid ah barnaamijyada ugu fiican ee loogu badalo sawirada muuqaalada suuqa. Ma aha kuwa ugu fiican sababtoo ah naqshadahooda interface, laakiin sidoo kale sababtoo ah shaqooyinkooda badan iyo fursadaha ay ku shaqeeyaan oo ay ku gaaraan natiijada tayada ugu fiican.
Adobe Spark Video ama Adobe Express
Sida aan wada ognahay, xirmada Adobe waxaa lagu yaqaanaa xirfadlayaasha iyo kuwa jecel adduunka farshaxanka garaafyada, kuwaas oo aad ku qaabayn karto calaamadaha, bogagga shabakadda, naqshadaha tifaftirka, iwm.
Mid ka mid ah qalabka la heli karo waa Adobe Spark Video, a qalab aad u fudud in la isticmaalo kaas oo aad si degdeg ah ugu bedeli karto sawiradaada muuqaal. Sidoo kale, waxay kuu ogolaanaysaa inaad habayn ku sameyso fiidiyowyada adigoo ku daraya qoraal, hagaajinta wakhtiga dib-u-ciyaarista, xulashada qaabka gaarka ah, iwm.
Kaliya waa inaad soo rar sawirkaaga oo ku dar slide, habbee waxa ku jira oo dhan, warbaahinta badan iyo qoraalka labadaba. Waxa xiga ayaa noqon doona inaad doorato mawduuc boggaga oo aad la qabsato qaabkaaga. hagaaji wakhtiyada, habayso muuqaalka oo waad dhammaysay.
qalab kale, Same muuqaal muuqaal ah oo kaa caawin kara qaar badan oo idinka mid ah inaad soo ururisaan dhammaan sawiradada daqiiqadaha aad jeceshahay, hal. Barnaamijkan ayaa si fiican loogu yaqaanaa dadka isticmaala, isaga oo ku jira, waxaa loo oggol yahay inuu ku daro muusikada, sawirro dhowr ah oo isku mid ah, fiidiyowyo kale, iwm.
Waa inaad furto barnaamijka, oo aad ku shubtaa sawirada aad rabto. Marka xigta, waxaad dooran doontaa template ama slides si aad ugu darto sawiradan. U habbee walxaha kala duwan si aad u jeceshahay, wax ka beddel, dalagga, u beddel cabbirrada, iwm.. Marka tan, ku dar qoraallada haddii aad u malaynayso inay lagama maarmaan tahay oo soo dejiso.
Aad loo jecel yahay, kuwa isticmaalayaashu waxay raadinayaan inay sawiradooda u beddelaan fiidiyowyo, waxayna sidoo kale ku samayn karaan qoraallo. Qalabkan online-ka ah wuxuu kuu ogolaanayaa inaad si fudud u geliso sawirada oo aad u beddesho muuqaal iyada oo ujeedadu tahay in la saameeyo dadweynaha. Waxaad ku dari kartaa qoraal, habyaalada gaarka ah, saamaynta, kala guurka, InVideo waa qalab aad u dhamaystiran.
Kaliya waa inaad gasho, ka dooro in ka badan shan kun oo naqshadood oo diyaar ah, soo geli sawirada oo aad rabto inaad beddesho, ku dar walxo kala duwan iyo kala-guuro iyo, ugu dambeyntii, soo deji faylka xalka la rabo.
Haddii aad rabto in aad u rogo sawirada si aad u fudud video, this qalab online iyo hawlaheeda kala duwan ayaa ku caawin doona. Iyada oo leh is-dhexgal aad u fudud, Animoto waa shaki la'aan barnaamij aan ahayn in laga waayo xirfadlayaal badan oo ku jira qaybta naqshadeynta iyo adduunka warbaahinta badan.. Animoto waxay leedahay kala-guuro kala duwan oo kala duwan iyo qalab qoraal ah si ay u geeyaan abuuristaada heerka xiga.
Soo rar sawirada oo dooro qaabka ugu habboon baahiyahaaga. Kadibna, hagaaji oo habee sawiradan, jar jar, dhaqaaji, ku dar filtarrada, iwm. Ka dhig mid kasta oo ka mid ah sawirada inuu yeesho qaab gaar ah. Ku dar qoraalka, haddii aad u malaynayso inay lama huraan tahay, oo dooro qaab ka dhigaya halabuurkaagu inuu soo baxo.
Barnaamijka tafatirka fiidyaha oo leh hawlo tafatir oo kala duwan oo aasaasi ah sida goynta, qaybinta, ku darista muusiga, isku xidhka, iwm. Qalabkan, ogow in ay leedahay kaliya lix maalmood oo tijaabo ah oo bilaash ah. Isticmaalayaasha qalabkan oo kale, VideoPad ayaa caan kasbaday waqtiyadii ugu dambeeyay iyadoo ay ugu wacan tahay maaraynteeda fudud iyo kala duwanaanshaheeda kala duwan ee doorashada.
Waxay ku siinaysaa suurtogalnimada inaad la shaqeyso in ka badan 50 kala-guuro iyo qaabab kala duwan, kaas oo aad ku dhejin karto abuurkaaga goobaha sida YouTube. Iyada oo ku xidhan tirada iyo miisaanka faylalka aad ku shaqaynayso, waxa laga yaabaa inay hoos u dhacdo mararka qaarkood.
Si fudud Dhowr gujis, waxaad awoodi doontaa inaad sameyso muuqaal muuqaallo online ah qaab aad u fudud. Haddii aad dooratid qalabkan, waxaad awoodi doontaa inaad si fudud u abuurto muuqaallo, kaliya aad sawiradaada geliso, tafatirto, habayso oo aad dhaqaajiso.
Tallaabooyinka ay tahay inaad raacdo si aad u gaarto natiijada xirfadeed waa sida soo socota; dhagsii ikhtiyaarka si aad u abuurto muuqaal cusub oo dooro goobaha daboolaya baahiyahaaga. Tag ku darista muuqaalada oo bilow soo raritaanka sawiradaada. Wax ka beddel faylalka la sheegay iyo goobaha la heli karo. Dooro ikhtiyaarka saamaynta sawirka oo bilow inaad u keento sawiradaada nolosha.
Sida aan ku aragnay qalabka intiisa kale, Clideo waa mid kale oo aad ku beddeli karto sawirradaada fiidiyowyo. Haddii aad qabsato barnaamijkan, waxaad ku dari kartaa faylal kala duwan hal mar, kaliya maahan sawirro, laakiin sidoo kale GIFS iyo fiidiyowyada. Waa madal khadka ah oo gebi ahaanba bilaash ah, kaas oo aan codsi kale oo dheeraad ah loo baahnayn.
Soo rar sawirada aad jeceshahay, u hagaaji faylalkan si isku xigta, u tafatir sidaad rabto, waad gooyn kartaa, soo jiidan kartaa, tafatir kartaa, iwm. Ku dar cajaladaha maqalka ah ee aad jeceshahay, hagaaji oo Haddii natiijadu ay ku qanciso, ha ka labalabayn ilbiriqsi ka dheer oo sii wad si aad u soo dejiso.
Waa mid aad u fudud, habka loogu beddelo sawirrada fiidiyowyada barnaamijyadan aan soo sheegnay. Kaliya waa inaad ku caddeysaa sawirada aad la shaqeyn doonto oo aad abuurto muuqaal cajiib ah. Xasuusnoow inay lagama maarmaan tahay in la ogaado qalabka ku habboon baahiyahaaga iyo midka aad ku qanacsan tahay markaad shaqaynayso.
Wadada buuxda ee maqaalka: LifeBytes » Barnaamijyada » Barnaamijyada loogu beddelo sawirrada muuqaallo
Sida loo furo feylasha CBR
Sideen u soo ceshan karaa fariimaha Telegram